'Nianjera indray izy': nihetsika i Bryce Hall taorian'ny horonantsary momba ny ady nataony tamin'ny 'tovovavy mistery' lasa malaza - Pop-Kolontsaina
'Nianjera indray izy': nihetsika i Bryce Hall taorian'ny horonantsary momba ny ady nataony tamin'ny 'tovovavy mistery' lasa malaza
Tao amin'ny clip navoakan'ny The Hollywood Fix tao amin'ny YouTube, Bryce Hall nijoro tamin'ny mpamorona lamaody Pretty Boy Larry eo afovoan'ny fety. Hita niady izy roa, ary nanipy totohondry ity farany ary nibolisatra tamin'ny kintana TikTok tamin'ny tany.
Nitsangana indray i Bryce Hall rehefa nisy olon-tsy fantatra anarana hafa nanipy fitokonana hafa alohan'ny nitondrany an'i Pretty Boy Larry. Ao amin'ny horonantsary, tsy voafaritra ny antony nahatonga ny ady, saingy taorian'ny nialan'ireo olona roa lahy dia niparitaka haingana ilay fety.
Tao amin'ny horonan-tsary iray hafa tamin'ny Hollywood Fix, nanazava i Pretty Boy Larry fa miresaka amin'ny tovovavy iray izy, vinavina ho Riley Hubatka. Nanatona azy avy eo i Bryce Hall ary nilaza fa:
'Zanako vavy io.'
Nilaza i Larry fa nantsoin'i Bryce ho rahavaviny ilay zazavavy, ary nilaza izy fa tao an-tranony ilay nitranga ny fifamaliana .
Bryce Hall dia nanaiky ny endrika nifanaovana tao amin'ny Instagram, niantso ilay olo-malaza mpanakanto ho 'mpanenjika akanjo tsy misy dikany.'
'Omaly alina, somary nitebiteby tamin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'i JRod. Nalefanay fotsiny ny olona sy ny renin'izy ireo, izay niafara tamin'ny fikomiana tsy fahita firy hanohitra ahy. Ka amin'ity indray mitoraka ity ho an'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahako dia hanana lisitra isika. Ka raha tsy ao anaty lisitra f *** ianao, aza manahirana ny fahatongavana 'fa manana goavambe valo aho ** mpiambina iray manery an'io s ** t io. Alefaso hafatra aho raha te ho ao anaty lisitra ianao. '
Lahatsoratra zarain'i Def Noodles (@defnoodles)
Namaly ny ady nataon'i Bryce Hall ireo mpankafy
Mpampiasa maro no naneho hevitra momba ny fifanolanana tamin'ny fahatsapana amin'ny Internet tamin'i Pretty Boy Larry. Ny sasany nanambara fa i Bryce Hall dia hanisa ny fifanolanana amin'ny 'adiny an-dalambe efa-polo'.
Mpampiasa iray naneho hevitra manokana:
'Ny hany hitako dia vahiny nasaina nahafinaritra nanandrana nanary fako ... eny, aza hadino izany fa i Bryce Hall ihany.'
Nanambara ny iray hafa:
'Mahita azy mahatsikaiky foana aho fa heveriny ho henjana daholo izy.'
Olona fahatelo naneho hevitra:
'Raha tsy nanampy an'i Bryce ry zalahy dia azoko antoka fa ho nandondona izy.'
Pikantsary avy amin'ny Instagram (defnoodles)
Tsy mbola naneho hevitra momba ny fifanolanana i Bryce Hall. Pretty Boy Larry koa dia tsy nilaza na inona na inona momba ny toe-javatra, ary ny tompon-trano tsy nanao fanambarana.
Vakio ihany koa: 'Fitokonana iray indray ary vita io': KSI dia nanambara fa efa ho very ny fantsona YouTube azy
daty firy mandra-pitiavanao
fa maninona no tsy mandefa sms amiko fotsiny izy
tiako ny vadiko hiverina amin'ilay vehivavy hafa
kilasy ho an'ny mpivady hiaraha-manao
Ny sakaizako dia mandray ahy amina famantarana tsy azo antoka